Meya Mutsva weHarare, VaJacob Mafume, Vanoti Vachaita Basa Ravo neMazvo
Meya mutsva weguta reHarare, uye vari nhengo ye MDC Alliance, Va Jacob Mafume, vanoti vanotambira nemufaro kusarudzwa kwavo sameya weguta guru renyika.
VaMafume, avo vakasarudzwa neChina, vakakunda VaLuckson Mukunguma veMDC-T nemavhoti mashanu mushure mekuwana mavhoti gumi nemapfumbamwe, VaMukunguma vachiwana mavhoti gumi nemana.
VaMafume vari kutora chigaro chakasiyiwa naVaHerbert Gomba, avo vakadzingwa sameya nevakafanobata chigara chemutungamiri weMDC-T, Muzvare Thokozani Khupe.
VaMafume vanoti vakatarisana nebasa guru sezvo guta ravo rakatarisana nemutoro mukuru munguva ino ye Covid-19, asi vachiti vanotarisira kushanda zvakasimba mukugadzirisa matambudziko ari muguta reHarare.
Va Mafume, avo vanove kanzura we Ward 17, vanoti dambudziko guru rakatarisana neguta ravo, inyaya yekushaya mari inodiwa mukugadzirisa nyaya dzemvura kuitira kuti vagari vawane mvura yakachena nguva dzose, kutakurwa kwemarara pamwe nemamwe matambudziko ari muguta iri.
Vanotiwo kusarudzwa kwavo kwakaratidza kuti makanzura avo haasi kuzobvuma kutyityidzirwa nevanhu vasina kuvhoterwa.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dziri kuziva zviri kuitika muMDC Alliance neMDC-T dzinoti Muzvare Khupe vasungwa mbira dzakondo rwendo rwuno sezvo vasingakwanisi kudzinga VaMafume sezvo VaMafume vakapinda muMDC Alliance vachibva kuPeople’s Democratic Party, rinova rimwe remapato akaumba MDC Alliance.
Studio7 haina kunzwa divi reMDC-T sezvo munyori mukuru mubato iri, VaDouglas Mwanzora, vanga vasiri kubatika panharembozha yavo.
People’s Democratic Party yakapinda muMDC Alliance ichitungamirwa naVaTendai Biti, avo vanova mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC Alliance, VaNelson Chamisa.